Fanazavana ny diplaomasian’i Vatikana : mitaky fifanajana sy ny tsy fanilihana ny kardinaly Parolin | NewsMada
Fanazavana ny diplaomasian’i Vatikana : mitaky fifanajana sy ny tsy fanilihana ny kardinaly Parolin
Nanao famelabelaran-kevitra mafonja ny sekreteram-panjakan’i Vatikana, ny kardinaly Pietro Parolin, omaly, teny Andoharanofotsy. “Mitondra ny anjara birikiny hatramin’izay ny fiangonana katolika momba ny fampandrosoana sy ny fitandroana ny zo maha olona, mikatsaka ny fandriampahalamena”, hoy izy. Nahazo ny anjarany ankolaka koa ireo mpanao politika.
Anisan’ny noresahiny ny momba ny diplomasian’i Vatikana, ifandraisana amin’ny firenen-kafa. Miisa 182 ireo firenena manana fifandraisana amin’ny Fiketrahana Masina. Notsiahiviny tamin’izany ireo olana samihafa diavin’ny firenena Malagasy : ireo sokajin’olona maro ao anatin’ny fahantrana sy fadiranovana, tsy fahampian-tsakafo, haintany, indrindra ny tsy fandriampahalemana.
Nohamafisiny fa mitaky zavatra maro ny fampiharana izany ny diplomasia izany. “Ny momba ny fifandraisana, fifanajana, firaisa-monina tsy fanavahana ny hafa, fiaraha-midinika eo amin’ny fandraisana anjara tandrify ny tsirairay. Samy tompon’andraikitra ny rehetra”, hoy ny ihany ity tanana an-kavanan’ny papa François. “Manoloana ireo, politika soritan’ny fiangonana, ny fanajana ny lafiny sosialy, zo maha olona, fiaraha-monina eo amin’ny samy mpiara-belona. Mifandray amin’izany eto Madagasikara ny fanavaozana ny lafiny toekarena”, hoy ny kardinaly Pietro Parolin. Diplomasia mivelatra ho an’ny rehetra, tsy atao ho an’ny mpino katolika ihany. Tsy misy fepetra manokana na mbola tadiavina hoentina manatanteraka izany. Raha eto Madagasikara, tsy tokony hisy faritra hiangarana sy foko hailika. Raha ny hita maneran-tany, ady ihany no miteraka ady ; krizy ihany no mitarika krizy. “Fototry ny fandriampahalemana ny firaisan-kina ”, hoy ihany ny kardinaly Pietro Parolin.
Ny ady amin’ny kolikoly
Ampahany amin’ny velan-kevitry ny kardinaly Pietro Parolin ihany ireo. Marihina fa nanatrika izany ny olona manan-kaja maro manana ny lazany, mpanao politika eo amin’ny fitondrana (mpanatanteraka sy mpanao lalàna), mpanohitra. Hita tao koa ny masoivoho, mpampianatra amin’ny ambaratonga ambony, pretra sy relijiozy avy amina fikambanana samihafa. Nomarihan’ny kardinaly Pietro Parolin, ny tsy tokony hitokana-monina sy ny ady amin’ny kolikoly. “Tanjona ny fifandraisana azo antoka, hisian’ny asa fampandrosoana sy ny fandriampahalemana, mitaky asa”, hoy izy.
Kardinaly Pietro Parolin
Notendrin’ny Papa François, sekreteram-panjakana, ny 31 aogositra 2013. Manana ny traikefany eo amin’ny lafiny diplomasia. Efa iraky ny fanjakana Vatican any amin’ny firenena maro manana ny mampiavaka azy eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena, ohatra, Venezuela, Chine, Korea Avaratra, Vietnam, Israely. Nanelanelana ny fampihavanana an’i Cuba sy Etazonia. Nivoaka tao amin’ny Oniversite Gregorianina, manana mari-pahaizana, “Dr en Droit Canon”, ary mifehy tenim-pirenena maro. Teratany italianina, 62 taona.